health – Page2– OOTDMYANMAR
HOUSEPLANTS INSPOS FOR YOUR BATHROOM
No Comments on HOUSEPLANTS INSPOS FOR YOUR BATHROOM
Living plants make bathrooms more homey. It improves the ambience and air quality. And bathrooms can be good for plants —it is warm and humid room that providesaperfect environment for plants. Thought the bathroom environment is not perfect to the all plants. But here are photos to inspire you:
ရေချိုးခန်းထဲမှာ အပင်တွေစိုက်ခြင်းက ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိစေတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ရရှိစေပါတယ်။ အပင်တွေက ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ လေထု ရဲ့အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေချိုးခန်းတွေက ပူနွေးပြီး စိုစွတ်တာကြောင့် အပင်စိုက်ဖို့ နေရာကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ရေချိုးခန်းရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားက အပင်တွေအားလုံးအတွက် မသင့်တော်ပေမယ့် ရေချိုးခန်းထဲမှာ စိုက်ဖို့သင့်တော်တဲ့ အပင်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
You can check out latest plant collection air our online shop @ootdmyanmarstore
Personal home grown plants waiting to be adopted by you
Tags ootdmyanmar, ootdmyanmarstore, plants
4 BAD COOKING HABITS TO UNLEARN
No Comments on4BAD COOKING HABITS TO UNLEARN
You may not be the best cook in the world but you are trying — that’s what is “important”. Since, we want you to improve and level up with your cooking skills — here are some habits you shouldn’t learn.
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဟင်းချက်အတော်ဆုံးလူသားမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ဟင်းလက်ရာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားနေကြသူချည်းပါဘဲ။ အဲ့ဒါကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ ဟင်းချက်တဲ့အရည်အသွေးကို တဆင့်မြှင့်ပေးချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဟင်းချက်ရာမှာရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့ အမှားလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
You do not preheat the pan. (မချက်ခင် အိုး ကို အပူမပေးဘူး )
Photo credits @simplyrecipes
Preheating your pan will prevent your food from sticking to the pan.
(ဟင်းမချက်ခင် အိုး ကို အပူပေးမယ်ဆိုရင် ဟင်းတွေ အိုးမှာကပ်မနေတော့ပါဘူး )
You crowd your pan. (အိုးထဲမှာဟင်းတွေကိုကျပ်သိပ်နေအောင်ထည့်တယ်)
Photo credits @twitter
When you crowd your pan, you only lower the heat because there are more colder pieces of food your pan needs to accommodate.
(အိုးထဲမှာ ချက်မယ့်ဟင်းတွေကို ကျပ်သိပ်နေအောင်ထည့်ထားရင် အပူရှိန်နဲ့မထိတဲ့အပိုင်းတွေက မကျက်ဘဲကျန်နေတတ်ပါတယ်။ )
You are usingadull knife. (တုံးတဲ့ ဓား ကို သုံးတယ်)
Photo credits @quenchmagazine
Usingadull knife is more dangerous than usingasharp one.
(တုံးနေတဲ့ဓား ကို သုံးတာက ထက်တဲ့ဓား ကိုသုံးတာထက် ပိုအန္တရာယ်များပါတယ်။ )
You forget to let the meat rest. (ဟင်းချက်ပြီးတာနဲ့အိုးပေါ်က ချက်ချင်းချတယ်)
It is all about allowing the meat’s juices to settle.
(ဟင်းကျက်သွားရင် မီးဖိုပေါ်မှာ ခဏတင်ထားပြီး ဟင်းအဆီအနှစ်တွေကိုဆက်အပူပေးထားလိုက်ပါ။ )
Tags cookingtips, health, ootdmyanmar
FOOD DELIVERY APPS FOR YOUR CRAVINGS
No Comments on FOOD DELIVERY APPS FOR YOUR CRAVINGS
Food apps have made is easier for users these days. We can discover new restaurants, check promos, and try new foods. But these aren’t just the advantages — it’s convenient because it’s delivered to your doorstep right at your fingertips!
Here are five food apps to check out for your future cravings:
The good thing about this app is it provides delivery services for both food and groceries.
The very first food delivery service to residents in Yangon.
Tags FOODAPPS, myanmar, ootdmyanmar, review, reviews
WHY YOU FEEL SO TIRED EVEN JUST STAYING AT HOME THIS QUARANTINE TIME
No Comments on WHY YOU FEEL SO TIRED EVEN JUST STAYING AT HOME THIS QUARANTINE TIME
ကွာရန်တင်း ကာလမှာ အိမ်ထဲမှာနေပေမယ့် ဘာကြောင့် ပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားနေရတာလဲ
Have you ever experiencedamoment in this coronavirus stay at home time where you did nothing, yet you still feel tired by 9pm?
Dr Sophie Bostock,aSleep Specialist explains:
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဘာမှမလုပ်ဘဲ အိမ်မှာနေနေကြပေမယ့် ညကိုးနာရီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာသလိုခံစားဖူးပါသလား။ အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ပက်သက်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Dr Sophie Bostock က အခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။
“It’s not surprising that lockdown is impacting how tired people are feeling. A lot of this comes down to routines being hacked, less exposure to sunlight, heightened anxiety from reading the news and increased screen time,”
“ အခုလိုဘယ်မှမသွားဘဲ အိမ်ထဲမှာနေထိုင်နေရတဲ့ကာလမှာ လူတွေအားလုံးက ပင်ပန်းနွယ်းနယ်မှုကို ခံစားရတာဟာ အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့မှုနည်းလာတာ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က သတင်းတွေဖတ်ပြီး ဒေါသထွက်ကြတာနဲ့ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုချိန်ပိုများလာတာတွေက ပုံမှန်နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ လုပ်ဆောင်နေကျ ကိစ္စဝိစ္စတွေနေရာမှာ အစားထိုးဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ”
“Because of all this our brains aren’t getting the same amount of stimulation that they are used to; we’re having to spend our days in the same few rooms of our houses and with the same few people, so it’s natural to feel more lethargic than normal asaresult.”
Here, Dr. Sophie shares her bits of advice for re-energizing.
“ အဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်ပဲ လူတွေရဲ့ဦးနှောက်က နေ့စဉ်ပုံမှန်လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုမျိုးကို မရရှိတော့ပါဘူး။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဒီအခန်းထဲမှာ ဒီလူတွေနဲ့ပဲ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့် လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေသလိုခံစားနေရတာက သဘာဝပါပဲ။ ” အားအင်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရာမှာ အသုံးဝင်မယ့် အကြံဉာဏ်အချို့ ကို Dr. Sophie က ဝေမျှပေးထားပါသေးတယ်။
Establishanew routine (လုပ်ငန်းဆောင်တာအသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါ ။)
And stick to it, too. “You’d think being able to sleep in longer and move less during lockdown would increase our energy levels in the day, but it’s quite the opposite,” notes Sophie. “It’s tempting to use the time you would be commuting to sleep-in, but messing with your circadian rhythms disrupts your body, making you more susceptible to tiredness.” Keep your screens inaseparate room to where you sleep too.
ပြီးတော့ အဲ့ဒီအလုပ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ပါ။ “ ဒီကာလမှ တစ်နေကုန်အိပ်နေပြီး လှုပ်ရှားရမယ့်ကိစ္စမျိုးကို ရှောင်နေတာက အားအင်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းစေမယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက လုံးဝ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ ” လို့ Sophie က ပြောပါတယ်။ “ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကို အိပ်စက်အနားယူရင်း ကုန်ဆုံးတာက သဘောကျစရာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် လူတွေရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အိပ်ချိန်စက်ဝန်း ကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ပိုခံစားရစေပါတယ်။” အိပ်စက်တဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေ ကို တစ်ခြားအခန်းတစ်ခန်းမှာ သပ်သပ်ထားလိုက်ပါ။
Restrict your news intake (သတင်းဖတ်ရှုခြင်းကို ကန့်သတ်ပါ ။)
Naturally, people are feeling quite anxious at the moment and constantly reading the news doesn’t help. “Whilst it’s important to keep up to date with what’s going on, try and moderate how much you’re checking the news, it’ll help to maintain your emotional balance,” says Sophie. “Stress triggers hyperactivity in our brains, releasing cortisol and our bodies go into defence-mode, which saps our energy and motivation.” Taking deep breaths and readingagood book before bed can help to.
လူတွေက အခုအချိန်မှာ အတော်လေးစိုးရိမ်သောကရောက်နေကြပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာက ဖော်ပြသမျှသတင်းတွေကို အဆက်မပြတ် ဖတ်နေခြင်းကလည်း ဘာအကူအညီမှ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ “ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာသိရဖို့အတွက် နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို အလျင်မီစေဖို့ကလည်း အရေးကြီးနေပါတယ်။ သတင်းဘယ်လောက်များများ ဖတ်မိသလဲဆိုတာနဲ့ ဖတ်တဲ့သတင်းတွေကို ချိန်ချိန်တွေးတောခြင်းကလည်း စိတ်ခံစားမှုကို အစွန်းမရောက်စေဘဲ ညီမျှအောင် ကူညီပေးပါတယ် ” လို့ Sophie က ပြောပါတယ်။ “ စိတ်ဖိစီးမှုက ဦးနှောက်ရဲ့ မူမမှန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး စတီးရွိုက်ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကို ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ လူ့ခန္ဓာကိုယ်က အလိုအလျောက် ကာကွယ်ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီအခါ လူတွေရဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှု တွေက လျော့နည်းသွားပါတော့တယ်။ ” မအိပ်ခင်မှာ စိတ်ငြိမ်အောင်ထားပြီး အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း နဲ့ စာအုပ်ဖတ်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
Exercise your mind and body (စိတ်နဲ့ခန္ဓာ ကို လေ့ကျင့်ပေးပါ ။)
If you started off with every intention to regularly do at-home workouts, but have found yourself glued to your laptop instead (same), here’s one other reason why it might be worth dusting off your yoga leggings after all.
အိမ်မှာနေတဲ့အချိန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမယ့် ကွန်ပျူတာ နဲ့ ဖုန်း ကို လက်ကမခွာနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ရောဂ ဝတ်စုံကိုဖုန်ခါပြီး လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးပါရစေ။
“With so many of us confined to our houses, it’s easy to move from screen to screen and neglect making enough time for physical exercise,” says Sophie. “Physical activity is not only vital to boosting energy levels, as it releases endorphins, but it also promotes happiness.”
Doing some simple stretches at home will help too.
“ အားလုံးက အိမ်မှာပဲနေကြတဲ့အတွက် ဖုန်း နဲ့ ကွန်ပျူတာ ကို ထည်လဲပြောင်းသုံးဖို့ အရမ်းလွယ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကို မေ့နေတတ်ကြတယ်” လို့ Sophie က ဆိုပါတယ်။ “ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တယ်ဆိုတာက စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ပေးရုံမက အန်ဒိုဖင် ဟော်မုန်းကိုထုတ်လွှတ်ပေးပြီး ပျော်ရွှင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ” အိမ်မှာနေရင်းလုပ်နိုင်တဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
“Overcome tiredness by preparing your body for sleep and restoration withagentle yoga workout,” adds Sophie. It’s equally as important to make sure your brain is kept stimulated too, by doing different activities each day, like reading, listening to music or learninganew skill. “The control centre of your body,ahealthy and cared-for brain will help beat tiredness.”
“ ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်အနားယူခြင်း၊ ရောဂ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတို့နဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို အနိုင်ယူလိုက်ပါ” လို့ Sophie က အကြံပြုပါသေးတယ်။ “ စာဖတ်ခြင်း ၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ အကြောင်းအရာအသစ်များကို လေ့လာသင်ယူခြင်းစတဲ့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မတူညီတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ပြီး ဦးနှောက်ကို လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ” လူ့ခ္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကျန်းမာပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ပင်မထိန်းချုပ်နေရာဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် က ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
This article originally appeared on Cosmopolitan.com. Minor edits have been made by the OOTDMYANMAR editors.
Cosmopolitan.com တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဆောင်းပါးကို OOTDMYANMAR အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှ အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
Tags health, ootdmyanmar
5 FUN & HEALTHY WORKOUTS YOU CAN DO AT HOME
No Comments on5FUN & HEALTHY WORKOUTS YOU CAN DO AT HOME
OOTDMYANMAR ကိုယ်တိုင် စမ်းကြည့်ထားတဲ့ အိမ်မှာလုပ်လို့ရမယ့် ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ
Remember, there are no excuses that can stop you from being fit and healthy. Asaproof to that we round listed5workouts you can try at home that require no equipment. Yes, there’s no need to spend money onagym membership or even buy exercise equipment to stay active! If you need some motivation, just remember: the more your workout, the more you can treat yourself to your fave snacks without feeling guilty.
ကျန်းမာပြီး အချိုးအစားလှပအောင်နေထိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကမှ ရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိရပါ။ အဲ့ဒါကို သက်သေပြဖို့အတွက် OOTDMYANMAR က ဘာစက်ပစ္စည်းမှ မလိုဘဲ အိမ်မှာပဲလုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းငါးမျိုးကို စမ်းကြည့်ထားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေက gym သွားပြီးငွေကုန်ခံစရာမလိုသလို ဘာစက်ပစ္စည်းမှ မလိုအပ်ဘဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ တွန်းအားလေးတစ်ခုလိုနေတယ်ဆိုရင်တော့ “လေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်လေ၊ ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ စားချင်တာစားနိုင်လေ” ဆိုတာလေးကို သတိရပေးပါနော်။
Get your heart pumping with these no-equipment workouts you can do at home:
ကဲ.. စက်ကိရိယာအကူအညီမလိုဘဲ အိမ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ ကျန်းမာလှပစွာ နေလိုက်ကြရအောင်
CARDIO WORKOUTS. https://www.youtube.com/watch?v=f4ploouAfWI&t=3s
*This story originally appeared on cosmoph.com. Minor edits have been made .
cosmoph.com မှဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာကို အနည်းငယ်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
Tags health, ootdmyanmar, stayathome
No Comments on FAST FACTS ABOUT COVID-19
As the virus spreads so quickly, we are also trying to help in preventing the widespread of this disease. Let’s be an advocate!
Virus ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းမြန်လာတာနဲ့အမျှ ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။
Photo credits to @worldhealthorganization
Tags covid19, health, stayhome, who
4 TIPS TO WORK-FROM-HOME IN TIMES OF COVID-19
No Comments on4TIPS TO WORK-FROM-HOME IN TIMES OF COVID-19
With the recent effort to keep the Corona virus (a.k.a. COVID-19 or nCoV) contained, many companies have implementedawork-from-home (WFH) policy. While working from home saves youalot of commute time it also hasalot of distractions. So in order to avoid slacking off. Here are simple ways to handle this situation:
COVID-19 လို့ခေါ်တဲ့ corona virus ရန်ကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီတော်တော်များများက ဝန်ထမ်းတွေကို work-from-home (WFH) အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်​ခြင်းအားဖြင့် သွားလာ​ရေးအတွက်အချိန်ကုန်သက်သာပြီး လူအများနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေရတဲ့အခြေအနေလည်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေကို အရိုးရှင်းဆုံးကိုင်တွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
1. Stick toaschedule. (အချိန်ဇယားအတိုင်းနေပါ။ )
Follow your office schedule—including lunch and coffee breaks—cross those tasks off your to-do list.
နေ့လယ်စာစားချိန်၊ ခဏနားချိန် စတဲ့ ကိုယ့်ရုံးရဲ့ အချိန်ဇယားအတိုင်းနေပြီး ပြီးရင် ကြက်ခြေခတ်ခြစ်ထားလိုက်ပါ။
2. Get out of your PJs. (ညအိပ်ဝတ်စုံထဲကနေထွက်ပါ။)
Photo credits to Morgan Lane
Get up, shower, get dressed, and put on some makeup to help get you into work mode.
အိပ်ယာထ၊ ရေချိုး၊ အဝတ်အစားလဲပြီး ရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ခံစားမှုမျိုးရအောင် ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေပါ။
3. Haveadedicated space for work. (အလုပ်လုပ်ဖို့နေရာသီးသန့်ထားပါ။)
Not everyone has space forahome office but it’s important to haveaspot where you can consistently sit down and work.
လူတိုင်းကတော့ အိမ်မှာ အလုပ်အတွက်သီးသန့်နေရာ ထားလေ့မရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
4. Be productive. (အလုပ်တွင်ပါစေ။)
Photo credits @complianceweek.com
Make sure to maximize your time and finish your deadlines.
အလုပ်ချိန်များများထားပြီး အလုပ်တွေကို အချိန်မီပြီးမြောက်ပါစေ။
Tags covid19, health, quarantine, stayhome, wfh, workfromhome